Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Qatar Airways ilwa nokuthengiswa ngokungekho semthethweni kwezilwanyana zasendle
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • iindaba • abantu • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Xanduva • Safety • News Sustainability • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Uvavanyo olungekho semthethweni loRhwebo lwasendle (i-IWT) lwaphuhliswa nguMbutho wezoThutho lomoya lwaMazwe ngaMazwe (IATA), ngenkxaso yeRoutES, njengenxalenye yenkqubo ye-IEnvA - yolawulo lokusingqongileyo kunye novavanyo lweenqwelo moya. Ukuthotyelwa kweMigangatho ye-IWT ye-IEnvA kunye neZenzo eziCetyiswayo (ii-ESARPs) zenza ukuba abasayine iinqwelomoya kwi-United for Wildlife Buckingham Palace Declaration babonise ukuba bazalisekisile ukuzibophelela okufanelekileyo ngaphakathi kwesiBhengezo.
I-Qatar Airways, ilungu elisekayo le-United for Wildlife Transport Taskforce, ityikitye isiBhengezo saseBuckingham Palace esidlulileyo ngo-2016.
Isibhengezo seBuckingham Palace esijolise ekuthatheni amanyathelo okwenyani ukuvala iindlela ezixhatshazwa ngabarhwebi urhwebo lwezilwanyana zasendle ngokungekho mthethweni, ukuhambisa iimveliso zabo.
Ngo-Meyi ka-2019, iQatar Airways yaba yinkampani yokuqala yenqwelomoya ukuphumeza isatifikethi kuvavanyo olungekho mthethweni loRhwebo ngeZilwanyana zasendle (IWT).
I-Qatar Airways ikwandisile ukuthatha inxaxheba kwayo kwi-USAID RoutES (Ukunciphisa amathuba okuThutha ngokungekho mthethweni kwezilwanyana ezinobungozi) Ubuhlakani, buqinisa ukuzibophelela kwayo ekulweni ukurhweba ngokungekho mthethweni kwezilwanyana zasendle kunye neemveliso zazo.
IQatar yoLawulo eliyiNtloko yeQatar Airways, uAkbar Al Baker
Qatar Airways, ilungu elisekayo le Umanyano lwabasebenzi bezothutho lwasendle, utyikitye imbali Isibhengezo seBuckingham Palace ngowama-2016, kujoliswe ekuthatheni amanyathelo okwenyani ukuvala iindlela ezixhatshazwa ngabarhwebi urhwebo lwezilwanyana zasendle ngokungekho mthethweni, ukuhambisa iimveliso zabo. Emva kwenyanga ka-Meyi ka-2017, inqwelo-moya yaqhubeka isayina iMemorandam yokuQondana noBambiswano lweROUTES. Ngo-Meyi ka-2019, iQatar Airways yaba yinkampani yokuqala yenqwelomoya ukuphumeza isatifikethi kuvavanyo olungekho mthethweni loRhwebo ngeZilwanyana zasendle (IWT). Isatifikethi soVavanyo lwe-IWT siqinisekisa ukuba iQatar Airways ineenkqubo, uqeqesho lwabasebenzi kunye neenkqubo zokunika ingxelo ezenza ukuthutyeleziswa kwemveliso yezilwanyana zasendle ngokungekho mthethweni kube nzima kakhulu.
Qatar Airways UMphathi oyiNtloko weQela, oHloniphekileyo uMnu. Akbar Al Baker, uthe: “Urhwebo lwezilwanyana zasendle olungekho mthethweni nolungazinzanga lusongela indalo yethu engafaniyo, kwaye lubeka umngcipheko kwimpilo nokhuseleko, ngakumbi kwiindawo ezihlelelekileyo. Sithatha amanyathelo okuphazamisa olu rhwebo lungekho mthethweni ukuze kulondolozwe izityalo nezilwanyana ezohlukeneyo nokukhusela indalo yethu ethambileyo. Sisahleli sizibophelele nezinye iinkokheli zeshishini lokubhabha ngenqwelomoya ukugxininisa umgaqo-nkqubo wethu wokunganyamezeli ukurhweba ngokungekho mthethweni kwezilwanyana zasendle kunye neemveliso zayo, kwaye sijoyina ubuhlakani beROUTES ngokuthi - 'Ayihambi nathi'. Siza kuqhubeka sisebenza namahlakani ethu sazisa kwaye siphucula ukubonwa kwezilwanyana zasendle ngokungekho mthethweni ukukhusela ezi zidalwa sizithandayo. ”
Umnumzana Crawford Allan, iRoutes Partnership Lead, ubamkele ubunkokheli beQatar Airways ibonakalisile kwiinzame zokuthintela ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni esithi: “Ngezenzo zayo zokwazisa, ukuqeqesha kunye nokurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni kwimigaqo-nkqubo yayo, iQatar Airways ibonakalise ukuzibophelela kwayo. Isibhengezo sebhotwe laseBuckingham nakwinjongo yoBambiswano lweROUTES. Ndinebhongo ukubona ukuba iQatar Airways iyaqhubeka nale mizamo kwaye iyinxalenye yenani elandayo leenkampani ezithi Azihambi Nathi. ”
Ubhubhane we-COVID-19 ubonakalisile ukuba ulwaphulo-mthetho lwezilwanyana zasendle aluyongozi nje kwindalo esingqongileyo nakwizinto eziphilayo, kodwa nakwimpilo yabantu. Ngaphandle kokuthintelwa kukhenketho, iingxelo zokuthimba izilwanyana ngokungekho mthethweni kunyaka ophelileyo zityhile ukuba abathengisi basathatha amathuba abo okuthubelezisa izinto ezingekho mthethweni ngenkqubo yothutho lomoya. I-Qatar Airways iyayiqonda into yokuba ngenkxaso evela kubambiswano lweUSAID ROUTES, ishishini lothutho lomoya linokuya kwiplanethi eluhlaza ebandakanya indalo kunye nolondolozo lwezilwanyana zasendle, iindawo ezibalulekileyo kuqoqosho lwezilwanyana zasendle olukhulayo kunye noluntu lwasekhaya.
Njengomtyikitywa ngokusesikweni kwiSibhengezo seNdlu yaseBuckingham ngo-Matshi 2016 kunye nelungu elisekayo le-United for Wildlife Transport Taskforce, Qatar Airways unomgaqo-nkqubo onganyamezeliyo kuthutho lwezilwanyana zasendle ezingekho mthethweni kunye neemveliso zazo. I-Qatar Airways Cargo isungule isahluko sesibini senkqubo yayo yozinzo ye-WeQare: Phinda wenze iPlanethi ekuqaleni kwalo nyaka, ijolise ekuthuthweni kwezilwanyana zasendle zibuyele kwindawo yazo yendalo, simahla. Inyathelo lokuthwala imithwalo lokugcina izilwanyana zasendle kunye nokuphinda-phinde iplanethi zihambelana nokuzibophelela kwenqwelo moya ekulweni ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni kunye norhwebo olungekho mthethweni lwezilwanyana zasendle kwaye ngaloo ndlela kukhuselwe okusingqongileyo kunye noMhlaba.